UYIFUMANA PHI KWAYE PHI I-MONNOS (MNS) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Uyifumana phi kwaye phi i-MONNOS (MNS) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Urhwebo MNS
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-MNS ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-MNS
I-Monnos liqonga lokurhweba nge-crypto ekuhlaleni apho abasebenzisi be-crypto kunye nabarhwebi bayazidibanisa kwaye bandise amathuba abo okwenza inzuzo kule nkqubo yezinto eziphilayo. Umsebenzi we-Monnos 'kukwandisa' ukwamkelwa kwe-crypto ukuzisa ukusetyenziswa ngokulula kunye nokwabelana ngolwazi kunye nokusebenza. I-MNS ngumqondiso okhutshwe yi-Monnos ukuxhobisa uluntu lwentlalo yoluntu. Abanini beethokheni ze-MNS bafumana izibonelelo ezinje ngesaphulelo kwimirhumo yorhwebo, ukufikelela kwiimpawu ezizodwa, ukufikelela kwiibhonasi zenyanga, ukufikelela kwizinyuso ezizodwa, kunye nemivuzo yamalungu aphezulu. Ngokusebenza ngokuKhawuleza kwe-Crypto ™, abasebenzisi beMonnos banokuzenzela ngokuzenzekelayo ukutshintshiselana phakathi kwazo zonke iiasethi nokuba zikhona iiPair phakathi kwazo.
Ixabiso langoku le-MNS yi- $ 0.01 kwaye ikwindawo ye-3130 kwi-Coinmarketcap kwaye kutshanje inyuse i-54.42 yepesenti ngexesha lokubhalwa.
I-MNS idwelisiwe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuqala uthenge i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-MNS .
rxjs phinda uzame ngokulibazisa
Kodwa asikenzi okwangoku, kuba i-MNS yi-altcoin kufuneka sidlulisele i-BTC yethu kutshintshiselwano ukuba i-MNS ingathengiswa, apha siza kusebenzisa iProBit njengotshintshiselwano lwethu. I-ProBit yindawo yotshintshiselwano eyaziwayo yokurhweba ii-altcoins kwaye inenani elikhulu lee-altcoyins ezithengiswayo. Sebenzisa ikhonkco elingezantsi ukubhalisa iakhawunti yakho entsha.
IproBit lutshintshiselwano nge-cryptocurrency ebandakanyiweyo eSeychelles (ProBit Global) naseMzantsi Korea (ProBit Korea) kunye nokwamkela abarhwebi abavela kwihlabathi liphela. Utshintshiselwano lubonelela ngokukhetha okubanzi kwee-altcoins, amathokheni eDeFi, iminyhadala, ukurhweba ngentlawulo ephantsi kunye nezinye iinkonzo ezaziwayo ze-crypto ezifikeleleka ngokubhaliswa ngokukhawuleza nangokuthe ngqo kwe-imeyile. Abasebenzisi baseKorea banokuthatha inxaxheba kurhwebo lwe-fiat, nangona iqonga lixhasa ukuthengiswa kweWon yaseKorea (KRW) kuphela. Ngaphandle koko, bonke abathengisi be-fiat kufuneka baqinisekise ubungqina babo; Nangona kunjalo, loo nto ayisiyomfuneko kubarhwebi bamanye amazwe be-crypto-to-crypto. Ngokubanzi, iqonga linoyilo olukhulu, amanyathelo okhuseleko anconywayo, kunye neqela elinobuchwephesha, elenza ukuba libe lolunye lonaniselwano olungcono lwe-altcoin kwihlabathi liphela. Asikwazanga ukufumana naluphi na ulwazi lokuba abatyali zimali baseMelika akufuneki bathengise kweli qonga lokurhweba. Nangona kunjalo, ukuba ungumtyali mali wase-US, kuya kufuneka usoloko uhlalutya ukuba imeko yakho yasekhaya iyaluthintela na urhwebo lwakho lwangaphandle lwe-crypto. Ngamanye amaxesha utshintshiselwano luvule iingcango zalo nangona imeko yakho yasekhaya ikuthintela ukuba uthengise.
Emva kokudlula kwinkqubo efanayo njengoko senzile ngaphambili ngeCoinbase, uya kucetyiswa ukuba usete ubunyani be-2FA, uyigqibe njengoko isongeza ukhuseleko kwiakhawunti yakho.
Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukwenza idipozithi ye-crypto, isikrini apha sinokujongeka sisoyikeka. Kodwa ungakhathazeki, ngokulula kulula kunokwenza ugqithiso lwebhanki. Kwibhokisi esekunene, uya kubona umtya weenombolo ezingahleliwe zisithi 'Idilesi ye-BTC', le yidilesi kawonke-wonke yesikhwama sakho se-BTC eProBit kwaye unokufumana i-BTC ngokunika le dilesi kumntu ukuba akuthumelele imali . Kuba ngoku sithumela i-BTC yethu esele siyithengile kwi-Coinbase kule wallet, cofa kwindawo ethi 'Copy Copy' okanye ucofe ekunene kwidilesi epheleleyo kwaye ucofe ikopi ukuze ubambe le dilesi kwibhodi yakho yokunamathisela.
Ngoku buyela kwiCoinbase, yiya kwiphepha lePotifoliyo kwaye ucofe kwi-BTC kuluhlu lwakho lweeasethi, emva koko ucofe ku 'Thumela' ngasekunene.
Kuya kufuneka ufumane isaziso sokuqinisekisa kwiProBit yakuba ifikile i-BTC yakho. Kwaye ngoku sele ukulungele ukuthenga i-MNS!
Buyela kwiProBit, emva koko uye 'kuTshintshiselwano'. Boom! Onjani wona umbono! Amanani ahlala eqhoqhoqho angangcangcazela, kodwa phumla, masizithobe iintloko malunga noku.
Kwikholamu esekunene kukho ibha yokukhangela, ngoku qiniseka ukuba 'i-BTC' ikhethiwe njengoko sithengisa i-BTC kwi-altcoin pair. Cofa kuyo kwaye uchwetheze 'MNS', kuya kufuneka ubone i-MNS / BTC, ukhethe eso sibini kwaye kuya kufuneka ubone itshathi yamaxabiso eMNS / BTC embindini wephepha.
Apha ngezantsi kukho ibhokisi eneqhosha eliluhlaza elithi 'Thenga i-MNS', ngaphakathi kwebhokisi, khetha ithebhu 'yeNtengiso' apha njengoko lolona hlobo luhamba phambili lokuthenga iiodolo. Unokuchwetheza kwisixa sakho okanye ukhethe ukuba yeyiphi na indawo oyithandayo ongayisebenzisa ekuthengeni, ngokunqakraza kumaqhosha eepesenti. Xa sele uqinisekisile yonke into, cofa 'Thenga i-MNS'. Voila! Ekugqibeleni uthenge i-MNS!
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba i-MNS idweliswe apho iyakutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-MNS yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokugcina zikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Ndingayithenga i-MNS ngemali?
Ngaba zikho iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-MNS eYurophu?
Ngaba kukho amanye amaqonga okuthenga iMNS okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-MNS ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Funda ngakumbi kwiziseko zeMONNOS kunye nexabiso langoku apha.
window ayichazwanga node js
norton.com/setup iqhosha lemveliso
ndingayithenga phi i-hnt